မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အေတီအမ်ငွေထုတ်စက်များမှ ငွေများကို ကတ်အတုများဖြင့် ထုတ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်များနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် တရားရုံးက အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ်ကို ယနေ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို မသန်စွမ်းသူများ ပြစ်တင်ရှုတ်ချ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘောတူညီချက်များကို ချိုးဖောက်သော မသန်စွမ်းသူများကို ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် ကြော်ငြာတစ်ခု ထည့်သွင်းမှုကြောင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်ပွားစေခဲ့သည်။
စားသုံးသူများအနေဖြင့် အဆင်မပြေမှုများကို တိုင်ကြားနိုင်မည့် စနစ်တစ်ခု မိတ်ဆက်
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၅ စားသုံးသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ အဆင်မပြေမှုများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် တိုင်ကြားနိုင်မည့် စနစ်တစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူများသမဂ္ဂက ယမန်နေ့တွင် စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာ လူတွေဆီကို စောဒကတက်တတ်တဲ့ အလေ့အထတစ်ခုကို ယူဆောင်လာခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးသူများသမဂ္ဂ၏ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်က.
မြန်မာ့လေတပ်အတွက် ဝယ်ယူထားသည့် JF-17 တိုက်လေယာဉ်ကို စမ်းသပ်ပျံသန်းနေ
တပ်မတော်(လေ) အတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည့် JF-17 အမျိုးအစား ဘက်စုံတိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်အား စမ်းသပ်ပျံသန်းနေသည့် ဓာတ်ပုံများ အင်တာနက်တွင် ပေါ်ထွက်လာသည်ဟု ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းများ ရေးသားသည့် James မဂ္ဂဇင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရေးသားထားသည်။
ရပ်ရွာအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းသစ်၊ နေရာသစ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရေးအတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၁၄ ရပ်ရွာအခြေပြုခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းသစ်၊ နေရာသစ်များ ထွက်ပေါ်လာရေးကို အားပေးရန်နှင့် ဈေးကွက်များ ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရပ်ရွာလူထုနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို နေပြည်တော်တွင် ဇွန် ၁၃ နှင့် ၁၄ ရက်နေ့များက ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပခဲ့သည်။ “မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်.
ရှောင် ဂလေစင် ရေးသားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဘိလပ်မြေစက်ရုံတစ်ခုအား ချဲ့ထွင်သည့် လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမပြုရန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း International Finance Corporation (IFC) အား ပြည်တွင်းအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၂၀၀ ခန့်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ မိတ္ထီလာမြို့အရှေ့ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၀.
ပင်လုံညီလာခံ သဘောတူညီချက်များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြန်သုံးသပ်ရန် နိုင်ငံရေးပါတီများ စည်းဝေး
၂၁ ရာစုပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအဝေးတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် သဘောတူညီချက် ၃၇ ချက်အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ အစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များက ကျင်းပကြမည်ဖြစ်သည်။